बागलुङ । जनता आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माण गरेका बागलुङका दलित, विपन्न, मुसलमान, अतिसीमान्तकृत र लोपान्मुख समुदायका बासिन्दा चिन्तामा परेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–४ दारेगैडाकी माया किसानले घरको छाना हाल्ने काम सके पनि अझै २ किस्ताको रकम पाएकी छैनन् । ‘जेनतेन काम पूरा गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी पैसा नआउँदा चिन्ता भएको छ ।’
सरकारी अनुदान पाउने आशाले घर बनाउन थाले पनि बीचमा अनुदान नआउँदा आफूहरू ऋणमा डुबेको गुनासो किसानको छ । ‘अनुदान नआउँदा घरको काम रोकियो,’ किसानले भनिन्, ‘अहिले ऋण खोजेर र उद्यारोमा निर्माण सामग्री ल्याएर छानो हाल्यौं, तर अनुदान आउने टुंगो छैन ।’ उनलाई नयाँ घरको ऋणको भार त छँदै छ, अहिले बस्दै आएको घर पनि टेकाको भरमा अडिएकाले कतिखेर ढल्ने हो भन्ने पीर पनि छ ।
किसान जस्तै जिल्लामा जनता आवासबाट घर बनाइरहेका अन्य बासिन्दा पनि अनुदान रकम नआउँदा मर्कामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत घर निर्माण शुरू गरेका जिल्लाका १०९ घरपरिवारमध्ये केहीले तेस्रो किस्तासम्म पाए पनि अन्तिम चौथो किस्ता भने कसैले पनि पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जनता आवासका लागि बागलुङमा १०९ घरको स्वीकृत भए पनि १०१ घरले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका थिए । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङका अनुसार पहिलो किस्तामा ८६ घरपरिवारले रू. ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए भने दोस्रो किस्तामा ४८ घरले ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा ३५ घरले ४२ लाख ८७ हजार ५ सय प्राप्त गरेका छन् ।
‘जिल्लामा अहिले तेस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ता लगेका धेरै र पहिलो किस्ता लगेका केहीले घरको छानो हालिसकेका छन्,’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ गौतमले भने । उनका अनुसार जनता आवासमा धेरैले घर निर्माण गरे पनि बजेट सकिएकाले बाँकी अनुदान दिन नसकिएको हो । ‘प्राविधिक मूल्यांकन गरेर अनुदान दिन मिल्ने घरहरूलाई संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार हुँदै आउने बजेट अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने । जनता आवासको अनुदानका लागि थप रू. २ करोड १२ लाख ९७ हजार आवश्यक रहेको जानकारी उनले दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका लागि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । शुरूका वर्षमा बादी जातिका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम पछि अन्य सीमान्तकृत एवं गरीब समुदायका लागि पनि विस्तार गरिएको हो ।